မအားတဲ့ကြားက တခါတလေ အညာသား ချက်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းခွက်လေးတွေပါဗျ။
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၈) ရက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Sunday, February 16, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရွှေညာသား at Friday, January 17, 20200comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook